Verona Arena misaona ny fatiantoka an'i Master Ezio Bosso
Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Verona Arena misaona ny fatiantoka an'i Master Ezio Bosso
Master Ezio Bosso
Ny fahafatesan'ny loza mahatsiravina sy fotoana fohy an'i Master Ezio Bosso nanaitra izao tontolo izao, ary izy rehetra Verona Arena Foundation nahazo ny vaovao tamim-pahakiviana sy fanaintainana mafy.
Notsiahivin'ny Mpitantana sy ny talen'ny zavakanto, Cecilia Gasdia, sakaizan'ny Maestro: "… Ho eo akaikinao foana aho miaraka amin'ireo teny feno hery sy finamanana ireo. Niarahaba ahy i Ezio tamin'ny antso an-tsary farany tamin'ny roa andro lasa izay.
“Fantatro, Ezio, noteneninao foana aho… satria nolazainao tamiko foana fa te hifindra any Verona ianao, ilay tanàna tianao ary toerana itiavan'ny ankamaroantsika anao. Ho anao, fanahy tsara tarehy, izay naka an-keriny anay tamin'ny faharanitan-tsainao, ny hatsaranao, ny hatsaranao, ny hatsaranao, ny herinao… tsy manam-petra.
“Namako, avelanao ao anaty ranomasim-pahoriana aho nefa eto amiko miaraka amiko… eo anilako.”
Misaona ny tanàna iray manontolo noho ny fahalasanan'ny Master Ezio Bosso. Tena tia azy tokoa i Verona ary tamin'ny 11 Aogositra dia nankalaza ny laharam-pahamehany tao amin'ny Arena izy tamin'ny hariva tsy hay hadinoina natokana ho an'ny Carmina Burana.
Maestro Bosso, tamin'ny fotoana nanombohany ny laharana voalohany tao amin'ny Arena, dia nilaza hoe: "Io no sehatry ny nofinofin'ireo mpitia mozika sy mpitia. Ny fandehanana any amin'ny Arena dia fihetsika feno fihetsem-po, izay mahatonga ny tantaran'ny hoe iza no teo ary tsy handeha hanao fampisehoana fotsiny raha mieritreritra izany ianao.
“Andraikitra iray miharihary miharihary ho ahy, na dia apetrako amin'ny zavatra rehetra ataoko foana aza izany. Ary maro ny olona Veronianina no mahalala an'io satria noteneniko tsy nihambahamba izy nandritra ireo kaonseritra nataoko taloha, nofinofin'ny reniko (ary koa ny dadako). Satria niaro azy ireo i Verona tamin'ny taonan'ny ady. Ny nolazaiko dia - raha tsy nisy Verona dia tsy teraka aho.
“Ary ny Arena no fanomezana voalohany azoko omena miaraka amin'ny rahavaviko ho an'ny ray aman-dreninay: hampody azy any amin'ny Arena tsy azony naleha tao anatin'izay taona izay. Ary izany no heveriko fa milaza izany rehetra izany, indrindra ny fankasitrahana fa hisy ny fihetsiky ny talen'ny hetsika - ary tsy izany ihany - ho hitanao amin'izany andro izany.
“Noho izany, misaotra indray, Verona, ary misaotra an-dRamatoa Gasdia, ary misaotra an'i Arena. Satria i Verona no Arena ary ny Arena dia i Verona. Marina izany, rehefa mifanamboatra ny mpitendry zavamaneno dia manatanteraka faniriana tsy manam-potoana izy ireo. ”
Avy eo, alohan'ny niarahabany ny vahoaka tamina fisandratana tao amin'ny Arena feno hipoka, dia i Master Ezio Bosso tenany ihany no nanambara ny fiverenany teny amin'ny sehatra Arenian teo an-tampon'ny foiben'ny IX Symphony of Beethoven, ary azo antoka fa iray tamin'ireo hetsika nandrasana indrindra ny hetsika -bahoaka.
Ny fahatsiarovana tsy mety ritra dia hijanona, ho an'izay rehetra nahafantatra azy, mpanakanto manan-tsaina sy manadio miavaka ary lehilahy manana zanak'olombelona lalina.
Master Bosso dia nodidiana tamin'ny ati-doha hanala homamiadana tamin'ny 2011 ary voan'ny aretina neurodegenaritive koa, autoimmune syndrome. Nanohy nilalao izy, avy eo tamin'ny volana septambra taona 2019 dia niharatsy ilay aretina ary nanimba ny fampiasana ny tànany. Hoy izy: “Tsy afaka milalao intsony aho, atsaharo ny fanontaniako.” 48 taona i Bosso rehefa nandalo.